सराई, पाल्पास्थित दिव्यज्योति माविको प्रवेशद्वारबाहिर घुँडा टेकेर एक व्यक्ति जमिन ढोग्दैछन्। त्यो तस्बिर थियो, सोही विद्यालयका प्राचार्य नारायण अधिकारी (६०) को। विद्यालयमा ३४ वर्ष बिताएपछि उमेरहदका कारण शुक्रबार उनी सेवानिवृत्त
ड्युटीमा रहँदा प्रहरी जवानलाई अचानक चक्कर आयो, त्यसपछि जे भयो त्यो कसैले कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैन !
आगराको राजा मण्डी रेलवे स्टेशनमा एउटा यस्तो घटना घटेको छ, जसको भिडियो हेरेर तपाईको मन रुन्छ । प्लेटफर्ममा ड्युटीमा रहँदा एक प्रहरी जवानलाई अचानक चक्कर आयो, त्यसपछि ट्र्याकबाट गुज्रिरहेको मालगाडीले
तपाईको फोनमा पनि इन्टरनेट र नेटवर्कको समस्या छ ? घरमा राखिएका यी चिज कारण हुन सक्छन्, थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौं । चाहे त्यो मोबाइल नेटवर्क होस् वा मोबाइल इन्टरनेट जडान, मानिसहरूलाई प्रायः तिनीहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्। कल ड्रप वा इन्टरनेट राम्रोसँग नआउनु, यी सबैको कारण नेटवर्क जडान हुन सक्छ।
पृथ्वीमै बन्दै छ ‘मून’, ५ अर्ब डलर लगानीमा बनेको मूनमा ५ सय डलरमा चन्द्रसतहको अनुभव लिन सकिने
अहिलेसम्म मात्र १२ जना चन्द्रसतहमा पुग्न सफल भएका छन्। त्यसो भए पृथ्वीमै चारवटा साना–चन्द्रमा किन नबनाउने त! जहाँ १ करोड मानिसले चन्द्रमाकै जस्तो सतहमा हरेक वर्ष पाइला राख्न सकून्! हो,
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल चैत्र १४ गते सोमबार इश्वी सन २०२२ मार्च २८ तारीख चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी तिथी श्रवण नक्षत्र सिद्ध योग वालव करण चन्द्रमा मकर राशिमा
पाँच दिनका लागि विद्यालय बन्द हुने
बैतडी, १३ चैत – बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय पाँच दिनका लागि बन्द हुने भएका छन् । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि अधिकांश शिक्षकहरू विद्यालय उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि विद्यालय
सन्दीप सरले आफ्नै घर जाँदै गरेकी १३ वर्षीया छात्रालाई एकान्तमा लगेर ………
काठमाडौं : १३ वर्षीया छात्रालाई यौ’नज’न्य दु’र्व्य’व’हार ग’रेको आरोपमा एक शिक्षक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने बिर्तामोड नगरपालिका– १० निवासी अन्दाजी ५० वर्षीय श्रीप्रसाद सिवाकोटी (सन्दीप) रहेको जिल्ला प्रहरी
एजेन्सी । लियोनल मेसी विश्वका उत्कृष्ट फुटबलरमध्ये एक हुन्। लामो समय फुटबलमा सनसनी मच्चाएका उनी हाल फुटबल करियरको अन्त्यतिर छन् । उसो त मेसीले अब सन्यास लिने चर्चा पनि भइरहेका
वीरगञ्जबाट जनकपुर जाँदै गरेको बस सर्लाहीमा दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु
काठमाडौं । वीरगञ्जबाट जनकपुरतर्फ गइरहेको यात्रुबहाक बस सर्लाहीमा दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा ३० जना घाइते भएका छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीस्थित फूलजोर भन्ने ठाउँमा आज बिहान सवा
नयाँ दिल्ली, १३ चैत : भारतमा ६ दिनमा पाँचौँ पटक पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढेको छ । आइतबार पेट्रोलमा प्रति लिटर मूल्य भारु ५० पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर ५५